कहाँ गयो १० करोड ? माओवादी केन्द्रको बैठकमा दश करोडको खोजि « Naya Bato
कहाँ गयो १० करोड ? माओवादी केन्द्रको बैठकमा दश करोडको खोजि
काठमाडौ: नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भोगेको पराजयको कारण खोज्न जुटेका छन् । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकमा जिल्ला इन्चार्जहरु शिर्ष नेतृत्व प्रति आक्रोश पोख्ने तयारीका साथ बैठकमा पुगेका छन् । पहिलो र दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले ८४ तहमा मात्रै जित हासिल गरेको छ ।
निर्वाचन प्रचारका लागि प्रचार विभागले लिएको १० करोड रुपैयाका बिषय पनि बैठकमा जोडदार रुपमा उठने भएको छ । सो रकम मध्ये १० लाख रुपैया पनि निर्वाचन प्रचारमा खर्च नभएको आरोप नेताहरुले लगाएका छन् । ‘बाँकी पैसा कहाँ गयो ?’ अर्का एक नेताले भने ‘एकातिर गाउँमा कार्यकर्ताहरु ऋणमा डुब्ने,नेताहरु पार्टीको पैसामा मस्ती गर्ने ? यो हुन सक्दैन ।’ एक नेताका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन प्रचारका लागि भनेर प्रवक्ता पम्फा भुसाललाई १० करोड रुपैया दिनु भएको थियो ।